About Us - Ningnbo Yierka AMatywina Co., Ltd
Ningbo Yierka AMatywina Co., Ltd yasekwa ngo-1982 ukuze aphande, ukuphuhlisa ukwenziwa nokuthengisa amatywina kubunzulu baphantsi komhlaba kunye womoya. iimveliso uphawu Ningbo Yierka kaThixo enziwa neteknoloji ephucukileyo kunye nomgangatho ophezulu nengqwalasela yethu lwabathengi elinwabileyo sele mvuzo intembeko abathengi ezintsha ukususela ekusungulweni yethu.
Yierka luvuliwe uphando sokubumbela iziko lobungcali iqela nokuvunda processing kunye nobuchule balo kuyilo kwimveliso, uphuhliso nokuvunda kwaye nokuhlanganiswa imveliso, njengangoku ngaphezu 20000set ngumngundo. Kwakhona Yierka luvuliwe imixube eziphathekayo itywina ezininzi kunye nokusebenzisa izinto kwamanye amazwe ekrwada kwizinga eliphezulu alandelayo nemigangatho yehlabathi inkqubo yemveliso efanayo alungiselelwe ukubonelela ngezisombululo Ukutywinwa zobungcali ethile umthengi.
Yierka Seals ethandwa nje kuphela China, kodwa ethengiswa eMpuma Yurophu, kuMbindi Mpuma, eMzantsi Merika, Japan kunye mpuma Asia. Yierka Seals Sikholelwa ukuba Innovation kunye ingqibelelo baba neentanda loshishino kwakufuneka ukwandisa zexa zethu ukunceda abathengi bethu abatsha nabadala ukukhula kunye nathi, ukusuka emandleni ukuya emandleni.